Malunga nathi - iSANXIA
Amashishini aphezulu kumzi-mveliso wokukhanya we-China.
Enye yezona ndawo ziphambili zokubumba zokupheka eAsia.
Elona shishini likhulu lemveliso yentsimbi yokupheka emhlabeni.
Ngaphezulu kwe-2000 yeemitha zesikwere seziko lovavanyo lokuvavanywa liqinisekisiwe yi-CNAS.
ISANXIA yasekwa ngonyaka ka1998
lishishini lokuvelisa elinobuchule elidibanisa i-R & D ezimeleyo, uyilo lweshishini, ukuvelisa ukungunda, imveliso yemveliso, ulawulo lomgangatho kunye nentengiso yeCookware. Inendawo yokugcina ephezulu yentsimbi yokupheka yentsimbi kwaye ikwangoyena shishino lukhulu emhlabeni.
Kangangexesha elide, iSANXIA ibibonelela ngeemveliso ezisemgangathweni ophezulu kunye neenkonzo zeeprojekthi ze-OEM zamakhulu abathengi abaziwayo kwihlabathi liphela. Amashumi amawaka okubumba athe abona inkqubo yentsebenziswano phakathi kwethu kunye neempawu ezikumgangatho wehlabathi. Iimveliso zithengiswa ikakhulu kumazwe angaphezu kwama-30, njenge-United States, Canada, iYurophu, iRussia, i-Australia, iJapan, uMzantsi Afrika, njl. Asiya.
Iimveliso zeSANXIA zigqibelele ngokwamacandelo, kubandakanya ioyile yemifuno ikhitshi yentsimbi, ikhitshi yensimbi, uhlobo olutsha lokujikeleza izinto zekhitshi zentsimbi, izinto zekhitshi ezingenanto, njl njl. nezinye izixhobo zokupheka. Zonke iimveliso zigqithile kwisatifikethi sobungcali se-FDA kunye ne-European Union LFGB, kwaye bonwabela igama eliphezulu kunye nokuthandwa kwimakethi yehlabathi.
ISANXIA ijolise kuphando lobuchwephesha bemveliso kunye nophuhliso kunye noyilo loyilo, kunye namaqela e-R & D ali-130 kunye namawaka abasebenzi bezobugcisa. Kule minyaka idlulileyo, uye wafunda amava ehlabathi ngokuqhubekayo, wazisa izixhobo ezihamba phambili zobuchwephesha, ubuchwephesha obuphambili, ubuchwephesha obuphuculweyo kunye nenqanaba lemveliso ekrelekrele, kwaye unemigca yokuphosa i-DISA ngokuzenzekelayo, imigca yemveliso yeoyile yemifuno Imigca eyahlukeneyo yemveliso yoqweqwe kunye neminye imveliso kunye nezixhobo zovavanyo.
I-SANXIA yokunyibilikisa umgca wemveliso ifakwe kwigumbi lokujonga intsimbi elishushu eliphambi kwesithando somlilo ukulawula umgangatho wezinto ezisetyenziswayo ngexesha lokwenyani, ukuqinisekisa umgangatho kunye nozinzo lwenkqubo yokuphosa, kunye nokufezekisa ukungabikho kwenkunkuma eqinileyo ngenkunkuma eqinileyo eqhubele phambili inkqubo yonyango.
Njengenkampani ekhokelayo kushishino lwesinyithi, sine-6 ​​eyona migangatho iphambili yokuphosa i-DISA, inqanaba lokuzenzekelayo lifikelela ngaphezulu kwe-98%. Ukusebenza kwayo okuzinzile nokuthembekileyo sisiqinisekiso esomeleleyo semveliso ekumgangatho ophezulu.
I-SANXIA yokugaya kakuhle idibanisa i-automation kunye nomsebenzi wezandla, ukulahla kudlula imigangatho yovavanyo, yenza ukunamathela kumbhinqo womphezulu womelele ngakumbi, kuqinisekisa imveliso yomelele kwaye intle.
I-SANXIA ihlengahlengisa izixhobo zokulwa ne-rust ezomeleleyo zomkhosi, iphonononga itekhnoloji ye-smart-cut, kwaye iyasebenzisana namashishini angaphambili ekuphuhliseni ipleyiti yokunyusa initriding imveliso yobushushu. iimveliso zineempawu ezibalaseleyo zokulwa nerusi kunye ne-anti-oxidation ngonyango lwangaphambi kokutshiza kwaye ugcwalise isikhewu sobuchwephesha bokunqanda umhlwa kwishishini lesinyithi.
Imigca yokuvelisa ioyile enobuchwephesha ngenkqubo yokuvelisa ekhuselekileyo ngokupheleleyo, musa ukunxibelelana nayo nayiphi na imichiza eyingozi, ioyile yemifuno yongezwa kuphela kukhuseleko olukhethekileyo.Kwiminyaka emininzi yamava kunye nokuphuculwa, iSANXIA yenza itekhnoloji ekhethekileyo ye "Super Oil Finished", eyahlukileyo imibala kunye nepropathi iimveliso zeoyile zinceda impucuko yoshishino ukuba ibuyele kubuhle bendalo.
Kwixesha elizayo, iSANXIA izakuqhubeka nokuhamba namaxesha, ilandele ukoneliseka kwabathengi ngobuchwephesha bokuyila nezinto ezintsha kwimveliso.
i-Cast yentsimbi enqabileyo, uNamel Skillet, xtreme Iron Skillet, ebizwa ngokuba yiCast Iron Skillets, I-Iron Iron Skillet, Isinyithi se Iron Iron,